ikhaya UMPHATHI weFOOTBALL I-Steven Gerrard Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGosa lebhola leBhola eliyaziwa kakhulu ngeSiqheno; 'UStevie G'. Ibali lethu le-Steven Gerrard Childhood kunye ne-Untold Biography Facts kuletha iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye.
Ewe, wonk 'ubani uyazi malunga noStevie G ngokungafaniyo kodwa abambalwa babecinga ubomi bakhe ngaphandle komdlalo othakazelisayo. Ngoku ngaphandle kokunye u-adieu, qalisa Qala.
I-Steven Gerrard Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
USteven George Gerrard wazalwa ngo-30th kaMeyi, i-1980 e-Whiston, i-Merseyside nguPaul Gerrard (uyise) noJulie Ann Gerrard (unina).
Wazalelwa ngesiphene sokuzalwa esabizwa 'clubfoot' owenze ukuba unyawo lwakhe luguqule kwi-inverted kunye nehla. Wayephathwa kwangoko. Abazali bakhe babengafuni ukuba ahambe ezinqeni zakhe okanye kwicala leenyawo zakhe.
Ukukhula, waba neengxaki ezininzi zokulimala ngelixa wayephoqelele indlela yakhe yokuphulukana nokukhubazeka kokuzalwa. Waye wadlulela kwiinkalo zeengxaki zengqolowa ezinzima njengomntwana omncinci. Zonke ezo zibuyele.
USteven Gerrard waya eStell's Primary (ngoku ngu-Huyton-with-Roby CE). Wachazwa njengentloni, inkwenkwe yangasese ngootitshala bakhe. "Wayesoloko ebengumntwana omhle, onobubele, okhuliswe kakuhle," utitshala ukhumbula. "Kodwa xa wayeya kuma-juniors, malunga neyesithandathu, waza waqala ukudlala ibhola ukuba ubuntu bakhe buphume. Akufuneki ukuba ube yingcali yebhola ekhatywayo ukubona ukuba uyimfuneko. Wayekho yonke indawo. Wayeyithanda nje. Wahlala kwaye waphefumlelwa ibhola. Utsho uGill Morgan owayengutitshala weqela lesikolweni. "Ngaloo mihla, kwaye iqela lakhe liphumelele kakhulu, ikakhulu ngenxa kaSteven." UGill Morgan uyaqhubeka
Ibhola yafika njengokwemvelo ku-Steven Gerrard omncinci. Njengomfana omncinane we-5, wavelisa umnqweno omangalisayo wokugxila kuphela kwibhola emva kokuwa nothando nemidlalo. Wathatha inxaxheba kwinqanaba lebhola elisentsimini kufuphi nekhaya elikufutshane neLeverton FC. Ngokusekelwe ekufuphi, uthando lukaSteven ngo-Everton lwalusondele. Wayeza kuhlala egqoka iijezi zakhe aze a tyelele iGoodison Park ukuba athathe iifoto kunye neetrophi kwizihlandlo eziliqela.
Nangona kunjalo, bekukho iingxaki. Umfana oseSteven Gerrard wakhala iinyembezi xa esenqatshelwe nguTolgate, iqela lekwenkwenkwe yendawo, ngenxa yobuncinane. Ngelo veki lokulahlwa, ulahlekelwa uhambo oluya eWembley kunye neSt Michaels (iqela lakhe leengcambu zengca) emva kokusika umlenze wakhe kwi Coke Can ngelixa uzama ukukhangela isilayidi.
I-Steven Gerrard Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Ingozi yabantwana
Ukuba nolunye ukulimala ngokukrakra ngeli xesha ukudlala ibhola kunye nabahlobo bakhe bekunokugqiba ukuphelisa umqeqeshi uSteven ngaphambi kokuba uqale. Ngethuba lokukhaba-malunga nabahlobo njengelutsha, uGerrard osemncinci wayenobungozi obuthathaka obunokubakhokhela umsebenzi wakhe. Emva kokuba ibhola inamathele kwinqaba, wahamba ukukhaba ibhola kodwa endaweni yokukhangela ifom yegadi.
Oku kwagqithisa isihlangu sakhe kunye nesinqe sakhe esikhulu. Omnye ugqirha wathi inzwane yakhe yayiza kufuna ukutshatyalaliswa. Oku kwenza abazali bakhe bafune ezinye iinketho zezokwelapha ukuze baphumelele uSteve emva kwendlela. Emva kokhetho olongezelelweyo lwezokwelapha, ithemba laboniswa kubazali bakhe njengendlela encinane kaSteve yokubuyela ngokugcwele kwaye yaphela kakuhle.
Emva kokuba abuye abuye, uGerrard waqala ukudlala elinye iqela lakuloo dolophu, iW Whiston Juniors. Lapha wabonwa ngabadlali beLiverpool, kwaye uya kujoyina i-academy yabo yobudala be-9.
Wayenama-tryouts kumaqela ambalwa ahlukeneyo, kuquka iManchester United, eyayihlulekayo. (ewe ufunde loo nto).
I-Steven Gerrard Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Ulwalamano
Emva kokuthandana nentatheli yefashini / imodeli uAlex Curran iminyaka eyi-5, lo mbhangqwana wafumana i-katoliji etshatileyo kwi-2007.
UCharran uye wavula umgca wakhe wefashini, wabhala ikholamu yefowuni ye-Daily Mail kwaye unamava ekufomeni. Esi sibini sinamadodakazi ka-3, uLilly-Ella (2003), Lexie (2006) kunye noLourdes (2011).
I-Steven Gerrard Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -I-Honorary Award
NgoSeptemba 2006, uGerrard wanyathelisa i-autobio yakhe 'Gerrard: I-Autobiography yam'.
Le ncwadi yaphumelela ukuphumelela iNtengiso yeNcwadi yoMnyaka kwiiBritish Book Awards.
Umqulu wesibini kaGerrard wengxelo yakhe, Indaba yam yaseLiverpool ' ebhaliweyo kunye UDonald McRae, yapapashwa ngoSeptemba 2015.
Iphepha lomntu liphela "Ndidlala uJon-Paul."
Umzala kaGerrard, uJon-Paul Gilhooley, wabulawa kwintlekele ye-1989 Hillsborough, xa uGerrard eyisibhozo. UJon-Paul, owayengu 10 xa efa, wayeyena mncinci kumaxhoba e-96 yentlekele. Wayeyena mncinane weLiverpool. Abazala bakhe uPala Kadiri noDonna Ridland, ababeza kumnceda, bamchaza njengomntu "Intsana enhle". Kubalulekile ukuqaphela ukubaUmfundi wesikolo saseSt Columbus wasePrayimari wayengumfana we-altare waza wabizwa ngokuba nguPapa.
Wayengumzala waseLiverpool, uSteven Gerrard kunye nabo babedlala kunye ndawonye xa bebantwana. USteven wayeneminyaka emncinane.
"Kwakunzima ukuba omnye wabazala bam belahlekelwe ngumphefumlo wakhe", Gerrard uthe. "Ukubona intsapho yakhe yokusabela kwandenza ndibe ngumdlali mna namhlanje."
Kwimifanekiso yakhe ye-2015, uGerard uxelele ukuba abadlali abane abalungileyo abaye badlala kunye naye babengumdlali weqela laseLiverpool Xabi Alonso, UFernando Torres kwaye Luis Suárez kwaye eNgilani qabane Wayne Rooney.
Wamkela ubudlelwane obuzukileyo IYunivesithi yaseYiverpool uJohn Moores 26 Julayi 2008 njengokwalukelwa kwegalelo lakhe kwimidlalo.
I-Steven Gerrard Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Wagqitha i-10 ubudala kunye neBentley yakhe kwi-2007
Ngo-1 Oktobha i-2007, uGerrard wayebandakanyeka kwi-speed-speed collision Southport xa imoto ayeqhuba ngayo yaxabela ibhasikidi elineminyaka elishumi ubudala, owabethelela esitrato waza wawela ngaphaya kweGrrard. Kamva watyelela inkwenkwe esibhedlele waza wamnika isibini seebhoti esayinwe Wayne Rooney, umdlali oyintanda kamfana, emva koko wahlala ekutyikityeni izigulane zezinye izigulane eziselula
I-Steven Gerrard Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Umrhumo wokuhlaselwa
Ngo-29 Disemba 2008, uGerrard wathatyathwa ngaphandle kweLounge Inn eSouthport ngokukrokrelwa kwicandelo le-20. Yena kunye nabanye ababini bavalelwa ngokuhlaselwa kweso sihlandlo esithile sengozi kunye nomzimba. Oku kwaxhamene nesiganeko esashiya i-DJ yebar kunye namazinyo aphukile kunye nokwehla ebunzini lakhe. UGerrard wayefunwa ukuba eze kwiNkundla yeNkundla yaseLiverpool kwaye ubhekane nesilingo sakhe esathi wayenetyala.
Abammeli bakhe babetyala enkundleni phambi kwecala kodwa uGerard wahlala engabamsulwa. UGerrard uvume ukubetha uMarcus McGee kodwa wathi ukuzikhusela. Ngo-24 Julayi, uGerrard wafunyaniswa enetyala le-jury. Ukulandela isigwebo, uGerard uthi wayekulindeleke ukuba abuyele ekhatyweni kwebhola aze afake amava emva kwakhe. Wavunyelwa ukuba akhululeke.
I-Steven Gerrard Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Ungumdlali we-3rd ukwenza i-500 okanye ukubonakala kwe-Premier League kwi-club ye-1
Ukunyaniseka akuqhelekanga kwimidlalo yanamhlanje, kodwa uSteven Gerrard uye wahlala kunye neLieverpool yakhe yonke imisebenzi kwaye wayenomdla ode kwaye uphumelele apho.
Ngo-25ti ka-Epreli, uGerrard waba ngumdlali we-3rd ukwenza i-500 ngaphezulu kwe-Premier League kwi-club ye-1. Inani labadlali abaye badlala imidlalo emininzi kwiklabhu enye ye-Premier League: uJamie Carragher (508 weLiverpool) kunye noRyan Giggs (632 kuMntu waseManyeneyo).
I-Steven Gerrard Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -ukonwatyiswa
Kwi-2011, uGerrard ubonakala kwifilimu 'Ngaba '.
Le movie yayinomfana osemtshatsheli waseLiverpool okhwela i-hitch-hikes to the I2005 UEFA Champions League Final.
I-Steven Gerrard Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Iinjongo zokuBaliswa kweNjongo
Nguye kuphela umdlali webhola oye wafumana injongo kwiCape Cup Final, iCape Cup Final, i-UEFA Cup Final kunye neFinale League Final. (Yisona isizathu sokuba uCaptain Fantastic uyazi).
Inombolo ye-15 kuphela yabadlali baye bafumana ezininzi iinjongo zeNkulumbuso yeGosa le-Premier League kuneGerrard (120). Akulunganga kumdlali ophakathi.
I-Steven Gerrard Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Imemori ye-UCL
Xa iLiverpool ihlasele i-3-0 emva kwesigama sokuqala ngexesha lomdlalo we-2005 Champions League, uStevie G nguye owathatha ngokufanelekileyo ukudonsa iLiverpool kumdlalo. Ufumene i-header yokuqala yokubakhuthaza kwaye ekugqibeleni wabanika i-Champions League trophy.
Ngokugqibeleleyo wagqiba ekubeni athathe isigwebo sokugqibela ngexesha lokudubula kwi-2005 CL yokugqibela. Nangona kwakungekho mfuneko yokuba athathe ngenxa yokuba uShevchenko wayelahlekile, kodwa wayefuna ukuba ngumgwebi wokugqibela ngenxa yokuba wayekholelwa ukuba nguyena mthetheli webhula kwaye ngoko kwakuyimfanelo yakhe ukuthatha esohlwayo.
UDavid Moyes Ibali leBantwana leNgcaciso ye-Untold Biography Facts
Umhla oguqulweyo: Nge-12 kaFebruwari ngo-2019
ULobert van Gaal Ibali leNgcaciso yeNgxelo ye-Untold Biography Facts